Lauren RAJAOBELINA · Marsa 2013 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Marsa, 2013
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Marsa, 2013
Azia Atsinanana 09 Marsa 2013
Amerika Latina 09 Marsa 2013
Nambaran'ny gazety boky WSJ, tamin''ny 1 Martsa fa voafidin'ny fifaninanana "Tanànan'ny Taona " ho tanàna mivoatra indrindra eto amin'izao tontolo izao i Medellín. Fa tamin'io andro io ihany koa, no nitateran'ny gazety fa nambaran'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'Olombelona ho tanàna iray faran'izay anjakan'ny tsy fitoviana indrindra eto amin'izao tontolo izao io tanàna io. Io fifanoherana goavana amin'ireo tatitra roa ireo io dia niteraka resabe tamin'ny tambazotra sosialy.
Mandray Ny Gadona Afrikana Ny Karnivaly Breziliana Any Salvador
Nanerana an'i Bahia, Salvador ary natao tamin'ny toerana telo tao an-tanàna , izay nanintona mpizaha tany antsasakà tapitrisa nandritra ny andro nanaovana ny lanonana, ilay Fetibe Karnivaly breziliana, fety lehibe indrindra maneran-tany. Ny fiarovana ny kolontsaina Afro-Breziliana no tena fototry ny fetibe Bahiane sady lohahevitra ho an'ilay tantara malazan'i Pelourinho amin'ity taona ity ny hoe ‘Black Carnivals’.